Maanta iyo muuqaalka Muqdisho, Arbaco Aug 01
Maanta iyo muuqaalka Muqdisho, Arbaco Aug 01	Last Updated on Monday, 13 August 2012 17:13	Written by Mogadishu Times	Wednesday, 01 August 2012 19:50	Sawiradan waxaa maanta laga soo qaaday magaalada Muqdisho. Waxaa sawirada ka muuqda dugsiga dhexe ee Dhagaxtuur. Iskoolka wuxuu ku yaalaa xaafada Hodan. Wuxuu dhinaca ku haayaa iskool Hodan.
Iskoolkan waa iskoolkii aan uga baxay dugsiga dhexe, xasuus gaar ah ayuu ii leeyahay. Iskoolka waxaa ku dhawaa meelo badan oo caan ah sida barxada banooniga lagu dheelo ee Hodan. Barxadan waxaa ku dheeli jiray ciyaartoy badan oo xaafada Hodan deganaa oo caan ka noqday Soomaaliya sida Feysal qaldaan, alle ha u naxariistee Leyli, Qaasimey, Cismaan Bashiir, Obside ama offside, kooxda Roma iyo magacyo badan oo aanan halkan lagu soo koobi karin. Waxaa kale oo ku yaalay bangi weyn.
Sawirada waxaa kale oo ka muuqda in dhismaha uu ka socdo meel walba. Waxaa la yaableh in waqtigan guryaha lagu kala gato boqolaal kun oo dollar. Waxaa jira dhismo lagu kala gatay hal milyan oo dollar.